(လူသားအားလုံးအတွက် အကျိုးရှိစေတာမို့ ဖတ်ဖြစ်အောင်ကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ ခင်ဗျာ)
ကျနော်တို့လူသားတိုင်းမှာ မိသားစုဆိုတဲ့ အသိုက် အမြုံ ဆိုတာ ရှိကြပါတယ်။ သက်ရှိသတ္တဝါတိုင်း မှာလည်း မိသားစုဆိုတာရှိကြစမြဲပါ… ဒီမိသားစု ဆိုတဲ့ လှပတဲ့အဓိပ္ပါယ်လေးက အရမ်းကိုလေးနက် မှု ရှိသလို ပျော်ရွှင်အေးချမ်းဖွယ် ကောင်းလွန်းလှ သော မေတ္တာကမ္ဘာလေး ဆိုလည်း (လုံးဝ) လုံးဝ မမှားနှိုင်ပါဘူး။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အမှီသဟဲပြုပြီး နေထိုင်နေကြတာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ…ကျနော့်အနေနဲ့ လူသားအားလုံးကို အေးချမ်း ပြီး ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော မိသားစုရဲ့ဘဝလေး ကို ပိုင်ဆိုင်စေလိုသောမေတ္တာဖြင့် ထောက်ပြစရာ လေး အနည်းငယ်တော့ရှိပါတယ်..။့့ အဲ့ဒါက ဘာလဲ ဆိုတော့…. အိမ်ထောင်စု တစ်စု မိသားစု တစ်စုဟာ ဘာ့ကြောင့် ဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့ ဒုက္ခတွေကို ရင်ဝယ်ပိုက်လို့ နေကြရသလဲ ဆိုတာလေးကိုပါ့့ လူတိုင်း သိထားသင့်ကြသလို၊ လိုက်နာဆောင်ရွက် သင့်မယ်လို့လည်း ကျနော့်အနေနဲ့တွေးထင် မိပါ တယ် ။ ကျနော့်အနေနဲ့ ပြောပြချင်တာက မိသားစု တစ်ခုလုံးကို ဆင်းရဲတွင်းထဲ နက်သထက်နက်စေ တတ်တဲ့အချက်လေးတွေကို ပြောလို့ပြချင်ပါတယ် အဲ့ဒီ အချက်အလက်တွေကတော့့
အိမ်တစ်အိမ်မှာ အိမ်ထောင်ကို ဦးစီးပြီးလုပ်တဲ့သူ တစ်နည်း အားဖြင့် “အဖေ” ကို အဓိကထား ဦစီး နေရာမှာ နေရာယူလို့ ထားရတာပါ။ ဒီ အိမ်ထောင် ဦးစီးညံ့ဖျင်းရင်လည်း ဒီအိမ်ဟာဆင်းရဲမှာပဲ၊ အိမ်ထောင်ဦးစီးအနေနဲ့မိန်းမယူ၊ ကလေးမွေးရုံ လောက်နဲ့တော့ အိမ်ထောင်ဦးစီးမခေါ်ထိုက်သေး ပါဘူး။ မိသားစုတာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်းပေးရ မယ့် တာဝန်တွေများစွာရှိသလို၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တွေအတွက်လည်း ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုတွေ ရှိလို့နေ မှာပဲ၊ ပစ္စုပ္ပန်နဲ့ အနာဂတ်ကို ဘယ်လိုဆက်လျှောက် ရမလဲဆိုတဲ့ အတွေး အမြင်တွေလည်း သူ့မှာအမြဲ လိုပဲ တွေးတောစဉ်းစာမှုတွေ ရှိသင့် ရှိထိုက်လို့နေ ပါတယ်။ ဘာတွေပဲ ဖြစ်လို့ လာလာ မိသားစုရဲ့ အရေးတွေမှန်သမျှကိုလည်း ရင်ကိုကော့ ခေါင်းကို မော့ပြီး ရှေ့က ဦးဆောင်မှုတွေလည်း လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက် သင့်ပါတယ်။ ကဲ့့အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲ တစ်နေ့ တစ်နေ့ကို စားလောက်ရုံလေးသာ အလုပ် ကို လုပ်မယ်၊ ပြီး အိမ်ပြန် ထမင်းစား ၊ အိပ်၊ ထ၊ စား၊သွား ဆိုယုံလောက်ပဲ လုပ်နေရင်တော့ ဒီအိမ် ဟာ သေချာတယ်… ဆင်းရဲတွင်းထဲရောက်ပြီး ဒုက္ခ တွေဟာ တစ်လှေကြီး တန်းစီပြီး ဝင်နေမှာပဲ့့ အဲ့ဒါ့ကြောင့် အဲ့ဒီအိမ်ဟာ အစဉ်အမြဲလိုပဲ ဆင်းရဲ တွင်းထဲမှာ ရောက်ရှိလို့ နေကြရမှာပါပဲ့့။
ဒီအချက်ကတော့ အရေးကြီးတယ်အိမ်တစ်အိမ်မှာ အိမ်တွင်းသူခိုးရှိနေရင်လည်း ဒီအိမ်ဟာ ဆင်းရဲမှာ ပဲ အိမ်ထောင်ဆိုတာ လင်နဲ့မယားနှစ်ဦးပေါင်းဖက် ပြီး တည်ဆောက် ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အဆောက်အအုံ မိသားစုလေးတစ်ခုကို ထူထောင် ထားကြတာပါ။ အဲ့ဒီ မိသားစုမှာ ပြဿနာတစ်ခုကို ဖြစ်စေနှိုင်တာ က ယောက်ျားကဖြစ်စေ၊ ဇနီးမယားကဖြစ်စေ တစ်ယောက်ယောက်ကအိမ်တွင်းသူခိုး ဖြစ်လို့နေ ရင် သေချာတယ့် အဲ့ဒီ မိသားစုဟာ ဆင်းရဲတွင်း နက်ပြီ့့ ဆိုလိုတာက ကိုယ့်ဘက်ကိုပဲကြည့်တတ် တဲ့ သူကိုဆိုလိုတာပါ။ ကိုယ့်အိမ်မှာဖြင့်အစစအရာ ရာ ပြည့်စုံ ဖူလုံလုံမှုက မရှိသေးလို့ စားဝတ် နေရေးက မပြေလည်သေးဘူး၊ ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးတွေ ဆီကို ခိုးခိုးပေးနေတာမျိုး မိသားစုရဲ့ရှေ့ရေးကို သိပ်လို့မတွေးတာမျိုး ထင်တိုင်းကျဲနေတာမျိုး လူ တွေ အထင်ကြီးအောင် လုပ်ချင်တဲ့အရာ မှန်သမျှ ထင်ရာကို စွတ်လို့ လုပ်တတ်တာမျိုး နေတော့ စားတော့ ထမင်းကို မငတ်ရုံတမယ်ပဲ ရပ်တည်နေ သရွေ့တော့ အဲ့ဒီအိမ်ဟာ ဆင်းရဲမှာပဲ့ နောက်ပြီး တစ်နည်းက အရက်သောက်တတ်တဲ့ယောက်ျား ကလည်းခိုးမှာပဲ၊ ချဲတွေ နှစ်လုံးတွေ ထိုးတတ်တဲ့ မိန်းမ ကလည်း ခိုးမှာ။ အဲ့ဒါမျိုးအကျင့်ဆိုးစရိုက် ဆိုးတွေ ရှိလို့နေကြတဲ့မိသားစု ဖြစ်လို့နေကြရပြီဆို ရင် သေချာတယ် အဲ့ဒီအိမ်ထောင်စု ဟာ ဆင်းရဲလို့ နေမှာပဲ့့။
အိမ်တစ်အိမ်မှာ မိသားစုဆိုတာ ဖြစ်ပေါ်လာမှာပဲ့ အဲ့မိသားစုတွေမှာပဲ ဖြစ်လေ့ ဖြစ်ထ ရှိတတ်ကြတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုက အကြီးနဲ့အငယ် မတည့်တာတို့ အမနဲ့ညီမ မတည့်တာ စတာတွေပဲပေါ့ စကားများ ကြ ရန်ဖြစ်တတ်ကြတာတွေအစုံပေါ့့ နေ့စဉ် နေ့တိုင်း လိုလို အိမ်တစ်အိမ်ဟာဆူပူမှုများစွာ ဖြစ် လို့ နေကြတယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီအိမ် အဲဒီမိသားစုဟာ ဘယ်တော့မှ သာယာမှုကိုမရရှိဘူး၊ နေ့တိုင်းလိုလို စကားများပြီးနေတတ်ကြတယ်၊ ဘေးကလူတွေရဲ့ အမြင်မှာ မသိရင် သူစိမ်းတွေလိုပဲ။ တစ်အိမ် ထဲမှာ အတူနေထိုင်ကြပြီး တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး သူ့ကို လည်း အဖတ်မလုပ်… ငါ့ထက် အကြီးပါလား ဆိုတဲ့ အသိမရှိတော့ လေးစားမှုဆိုတာ မရှိကြဘူး ဖြစ်လို့နေရင်တော့ အဲ့ဒီ့့ အိမ်ထောင်စုဟာ ကြာ လာတဲ့အခါမှာ လဲပြိုပြီး ဆင်းရဲတွင်းထဲက နေ လွတ်မြောက် နိုင်မှာကို မဟုတ်ကြပါဘူး။
လူဆိုတာ လူနဲ့ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာနေတတ်မှ လူနဲ့ တူတာပါ။ အဲ့လိုမှ မနေတတ် မထိုင်တတ်ရင် တော့ လောကကြီးထဲမှာ သူ့ကို လူဖြစ်တယ်ဆိုရုံပဲ သတ်မှတ်ထားရုံ သက်သက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူနဲ့ လူ့ပတ်ဝန်းကျင် မှာ သင့်တင့် လျှောက်ပတ် လိုက် လျှော ညီထွေစွာ နေတတ် ထိုင်တတ် သွားတတ် လာတတ် ပြောဆို ဆက်ဆံတတ်တဲ့ လူလို့ မခေါ် ထိုက်လောက်ပါဘူး။ အဓိကပြောချင်တာက ကိုယ်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အဆင်ပြေအောင် နေစေချင်တာပါ့့ အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲ သူနဲ့တွေ့က ငါ့အကြောင်းပြော၊ ငါနဲ့တွေ့ရင် သူ့အကြောင်း ပြော လောကကြီးကို အကောင်းမမြင်တတ်ဘူး ဆန့်ကျင်ဘက် အတွေး တွေရှိနေသ၍တော့ ဘယ်တော့မှအဆင်ပြေနိုင် မှာ မဟုတ်ပါဘူ ။ အဲ့လိုလူမျိုးကို ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကမှ လည်း ကူညီ ဖေးမ စောင့်ရှောက်နေမှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် အမြဲလိုပဲ ဆင်းရဲလို့နေမှာပဲ့့ ဘယ်တော့မှ အဆင် ပြေပြေနဲ့ ခရီး ဆက်နိုင်နေမှာမဟုတ်တဲ့အတွက် ဒီအိမ်ဟာလည်း ဆင်းရဲနေမှာပဲ။
ကျနော်ပြောတဲ့ဒီအချက်တွေတစ်ချက်ချက်နဲ့ငြိနေတယ် ဆိုရင် ဒီမိသားစုရဲ့အနာဂတ်ဟာ လှပနေမှာ မဟုတ်နိုင်တဲ့အတွက် စာဖတ်ပရိတ်သတ်များ အား လုံးဟာလည်း ဒီအချက်လေးတွေကို သေချာ ဖတ် မှတ်ပြီး ရှောင်ကျဉ်စရာ မှန်သမျှ ရှောင်ကျဉ်ကာ နေထိုင်၍ သွားကြမယ်ဆိုရင် အထူးပင် ဝမ်းသာ ကြည်နူး ပီတိထူးကို ရရှိစေနှိုင်ပြီး စစ်မှန်တဲ့ မိသားစုလေးရဲ့ တန်ဖိုးမဖြတ်နှိုင်တဲ့ ချမ်းသာခြင်း သုခကို ဧကံပင်မလွဲ ပိုင်ဆိုင်လို့ လာကြရမှာပါ။
#Credit…ကိုသက်မှုခင်းရှုထောင့်ကျောက်တံခါး
(လူသားအားလုံးအတှကျ အကြိုးရှိစတောမို့ ဖတျဖွဈအောငျကို ဖတျကွညျ့လိုကျပါ ခငျဗြာ)
ကနြျောတို့လူသားတိုငျးမှာ မိသားစုဆိုတဲ့ အသိုကျ အမွုံ ဆိုတာ ရှိကွပါတယျ။ သကျရှိသတ်တဝါတိုငျး မှာလညျး မိသားစုဆိုတာရှိကွစမွဲပါ… ဒီမိသားစု ဆိုတဲ့ လှပတဲ့အဓိပ်ပါယျလေးက အရမျးကိုလေးနကျ မှု ရှိသလို ပြျောရှငျအေးခမျြးဖှယျ ကောငျးလှနျးလှ သော မတ်ေတာကမ်ဘာလေး ဆိုလညျး (လုံးဝ) လုံးဝ မမှားနှိုငျပါဘူး။ တဈဦးနဲ့တဈဦး အမှီသဟဲပွုပွီး နထေိုငျနကွေတာ ပဲ ဖွဈပါတယျ။
ကဲ…ကနြေျာ့အနနေဲ့ လူသားအားလုံးကို အေးခမျြး ပွီး ပြျောရှငျဖှယျကောငျးသော မိသားစုရဲ့ဘဝလေး ကို ပိုငျဆိုငျစလေိုသောမတ်ေတာဖွငျ့ ထောကျပွစရာ လေး အနညျးငယျတော့ရှိပါတယျ..။့့ အဲ့ဒါက ဘာလဲ ဆိုတော့…. အိမျထောငျစု တဈစု မိသားစု တဈစုဟာ ဘာ့ကွောငျ့ ဆငျးဆငျးရဲရဲနဲ့ ဒုက်ခတှကေို ရငျဝယျပိုကျလို့ နကွေရသလဲ ဆိုတာလေးကိုပါ့့ လူတိုငျး သိထားသငျ့ကွသလို၊ လိုကျနာဆောငျရှကျ သငျ့မယျလို့လညျး ကနြေျာ့အနနေဲ့တှေးထငျ မိပါ တယျ ။ ကနြေျာ့အနနေဲ့ ပွောပွခငျြတာက မိသားစု တဈခုလုံးကို ဆငျးရဲတှငျးထဲ နကျသထကျနကျစေ တတျတဲ့အခကျြလေးတှကေို ပွောလို့ပွခငျြပါတယျ အဲ့ဒီ အခကျြအလကျတှကေတော့့
အိမျတဈအိမျမှာ အိမျထောငျကို ဦးစီးပွီးလုပျတဲ့သူ တဈနညျး အားဖွငျ့ “အဖေ” ကို အဓိကထား ဦစီး နရောမှာ နရောယူလို့ ထားရတာပါ။ ဒီ အိမျထောငျ ဦးစီးညံ့ဖငျြးရငျလညျး ဒီအိမျဟာဆငျးရဲမှာပဲ၊ အိမျထောငျဦးစီးအနနေဲ့မိနျးမယူ၊ ကလေးမှေးရုံ လောကျနဲ့တော့ အိမျထောငျဦးစီးမချေါထိုကျသေး ပါဘူး။ မိသားစုတာဝနျတှကေို ထမျးဆောငျးပေးရ မယျ့ တာဝနျတှမြေားစှာရှိသလို၊ စီးပှားရေးလုပျငနျး တှအေတှကျလညျး ဆှေးနှေးတိုငျပငျမှုတှေ ရှိလို့နေ မှာပဲ၊ ပစ်စုပ်ပနျနဲ့ အနာဂတျကို ဘယျလိုဆကျလြှောကျ ရမလဲဆိုတဲ့ အတှေး အမွငျတှလေညျး သူ့မှာအမွဲ လိုပဲ တှေးတောစဉျးစာမှုတှေ ရှိသငျ့ ရှိထိုကျလို့နေ ပါတယျ။ ဘာတှပေဲ ဖွဈလို့ လာလာ မိသားစုရဲ့ အရေးတှမှေနျသမြှကိုလညျး ရငျကိုကော့ ခေါငျးကို မော့ပွီး ရှကေ့ ဦးဆောငျမှုတှလေညျး လုပျကိုငျ ဆောငျရှကျ သငျ့ပါတယျ။ ကဲ့့အဲ့လိုမှမဟုတျပဲ တဈနေ့ တဈနကေို့ စားလောကျရုံလေးသာ အလုပျ ကို လုပျမယျ၊ ပွီး အိမျပွနျ ထမငျးစား ၊ အိပျ၊ ထ၊ စား၊သှား ဆိုယုံလောကျပဲ လုပျနရေငျတော့ ဒီအိမျ ဟာ သခြောတယျ… ဆငျးရဲတှငျးထဲရောကျပွီး ဒုက်ခ တှဟော တဈလှကွေီး တနျးစီပွီး ဝငျနမှောပဲ့့ အဲ့ဒါ့ကွောငျ့ အဲ့ဒီအိမျဟာ အစဉျအမွဲလိုပဲ ဆငျးရဲ တှငျးထဲမှာ ရောကျရှိလို့ နကွေရမှာပါပဲ့့။
ဒီအခကျြကတော့ အရေးကွီးတယျအိမျတဈအိမျမှာ အိမျတှငျးသူခိုးရှိနရေငျလညျး ဒီအိမျဟာ ဆငျးရဲမှာ ပဲ အိမျထောငျဆိုတာ လငျနဲ့မယားနှဈဦးပေါငျးဖကျ ပွီး တညျဆောကျ ဖှဲ့စညျးထားတဲ့ အဆောကျအအုံ မိသားစုလေးတဈခုကို ထူထောငျ ထားကွတာပါ။ အဲ့ဒီ မိသားစုမှာ ပွဿနာတဈခုကို ဖွဈစနှေိုငျတာ က ယောကျြားကဖွဈစေ၊ ဇနီးမယားကဖွဈစေ တဈယောကျယောကျကအိမျတှငျးသူခိုး ဖွဈလို့နေ ရငျ သခြောတယျ့ အဲ့ဒီ မိသားစုဟာ ဆငျးရဲတှငျး နကျပွီ့့ ဆိုလိုတာက ကိုယျ့ဘကျကိုပဲကွညျ့တတျ တဲ့ သူကိုဆိုလိုတာပါ။ ကိုယျ့အိမျမှာဖွငျ့အစစအရာ ရာ ပွညျ့စုံ ဖူလုံလုံမှုက မရှိသေးလို့ စားဝတျ နရေေးက မပွလေညျသေးဘူး၊ ကိုယျ့ရဲ့အမြိုးတှေ ဆီကို ခိုးခိုးပေးနတောမြိုး မိသားစုရဲ့ရှရေ့ေးကို သိပျလို့မတှေးတာမြိုး ထငျတိုငျးကြဲနတောမြိုး လူ တှေ အထငျကွီးအောငျ လုပျခငျြတဲ့အရာ မှနျသမြှ ထငျရာကို စှတျလို့ လုပျတတျတာမြိုး နတေော့ စားတော့ ထမငျးကို မငတျရုံတမယျပဲ ရပျတညျနေ သရှတေ့ော့ အဲ့ဒီအိမျဟာ ဆငျးရဲမှာပဲ့ နောကျပွီး တဈနညျးက အရကျသောကျတတျတဲ့ယောကျြား ကလညျးခိုးမှာပဲ၊ ခြဲတှေ နှဈလုံးတှေ ထိုးတတျတဲ့ မိနျးမ ကလညျး ခိုးမှာ။ အဲ့ဒါမြိုးအကငျြ့ဆိုးစရိုကျ ဆိုးတှေ ရှိလို့နကွေတဲ့မိသားစု ဖွဈလို့နကွေရပွီဆို ရငျ သခြောတယျ အဲ့ဒီအိမျထောငျစု ဟာ ဆငျးရဲလို့ နမှောပဲ့့။
အိမျတဈအိမျမှာ မိသားစုဆိုတာ ဖွဈပျေါလာမှာပဲ့ အဲ့မိသားစုတှမှောပဲ ဖွဈလေ့ ဖွဈထ ရှိတတျကွတဲ့ ပွဿနာတဈခုက အကွီးနဲ့အငယျ မတညျ့တာတို့ အမနဲ့ညီမ မတညျ့တာ စတာတှပေဲပေါ့ စကားမြား ကွ ရနျဖွဈတတျကွတာတှအေစုံပေါ့့ နစေ့ဉျ နတေို့ငျး လိုလို အိမျတဈအိမျဟာဆူပူမှုမြားစှာ ဖွဈ လို့ နကွေတယျဆိုရငျ အဲ့ဒီအိမျ အဲဒီမိသားစုဟာ ဘယျတော့မှ သာယာမှုကိုမရရှိဘူး၊ နတေို့ငျးလိုလို စကားမြားပွီးနတေတျကွတယျ၊ ဘေးကလူတှရေဲ့ အမွငျမှာ မသိရငျ သူစိမျးတှလေိုပဲ။ တဈအိမျ ထဲမှာ အတူနထေိုငျကွပွီး တဈဦးနဲ့ တဈဦး သူ့ကို လညျး အဖတျမလုပျ… ငါ့ထကျ အကွီးပါလား ဆိုတဲ့ အသိမရှိတော့ လေးစားမှုဆိုတာ မရှိကွဘူး ဖွဈလို့နရေငျတော့ အဲ့ဒီ့့ အိမျထောငျစုဟာ ကွာ လာတဲ့အခါမှာ လဲပွိုပွီး ဆငျးရဲတှငျးထဲက နေ လှတျမွောကျ နိုငျမှာကို မဟုတျကွပါဘူး။
လူဆိုတာ လူနဲ့ လူ့အသိုငျးအဝိုငျးထဲမှာနတေတျမှ လူနဲ့ တူတာပါ။ အဲ့လိုမှ မနတေတျ မထိုငျတတျရငျ တော့ လောကကွီးထဲမှာ သူ့ကို လူဖွဈတယျဆိုရုံပဲ သတျမှတျထားရုံ သကျသကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ လူနဲ့ လူ့ပတျဝနျးကငျြ မှာ သငျ့တငျ့ လြှောကျပတျ လိုကျ လြှော ညီထှစှော နတေတျ ထိုငျတတျ သှားတတျ လာတတျ ပွောဆို ဆကျဆံတတျတဲ့ လူလို့ မချေါ ထိုကျလောကျပါဘူး။ အဓိကပွောခငျြတာက ကိုယျနတေဲ့ပတျဝနျးကငျြနဲ့ အဆငျပွအေောငျ နစေခေငျြတာပါ့့ အဲ့လိုမှမဟုတျပဲ သူနဲ့တှကေ့ ငါ့အကွောငျးပွော၊ ငါနဲ့တှရေ့ငျ သူ့အကွောငျး ပွော လောကကွီးကို အကောငျးမမွငျတတျဘူး ဆနျ့ကငျြဘကျ အတှေး တှရှေိနသေ၍တော့ ဘယျတော့မှအဆငျပွနေိုငျ မှာ မဟုတျပါဘူ ။ အဲ့လိုလူမြိုးကို ဘယျလိုပုဂ်ဂိုလျမြိုးကမှ လညျး ကူညီ ဖေးမ စောငျ့ရှောကျနမှော မဟုတျတဲ့အတှကျ အမွဲလိုပဲ ဆငျးရဲလို့နမှောပဲ့့ ဘယျတော့မှ အဆငျ ပွပွေနေဲ့ ခရီး ဆကျနိုငျနမှောမဟုတျတဲ့အတှကျ ဒီအိမျဟာလညျး ဆငျးရဲနမှောပဲ။
ကနြျောပွောတဲ့ဒီအခကျြတှတေဈခကျြခကျြနဲ့ငွိနတေယျ ဆိုရငျ ဒီမိသားစုရဲ့အနာဂတျဟာ လှပနမှော မဟုတျနိုငျတဲ့အတှကျ စာဖတျပရိတျသတျမြား အား လုံးဟာလညျး ဒီအခကျြလေးတှကေို သခြော ဖတျ မှတျပွီး ရှောငျကဉျြစရာ မှနျသမြှ ရှောငျကဉျြကာ နထေိုငျ၍ သှားကွမယျဆိုရငျ အထူးပငျ ဝမျးသာ ကွညျနူး ပီတိထူးကို ရရှိစနှေိုငျပွီး စဈမှနျတဲ့ မိသားစုလေးရဲ့ တနျဖိုးမဖွတျနှိုငျတဲ့ ခမျြးသာခွငျး သုခကို ဧကံပငျမလှဲ ပိုငျဆိုငျလို့ လာကွရမှာပါ။
#Credit…ကိုသကျမှုခငျးရှုထောင့ျကြောကျတံခါး